Filipina : olana rano ao Manille · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2010 9:11 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, македонски, Español, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Saripika avy amin'ny pejy Flickr an'i rickyli99
Miaina olana tsy fahampian'ny rano sedrain'ireo mpampiasa rano an-tapitrisany ankehitriny i Metro Manille, renivohitr'i Filipina. Tezitra amin'ny tsy fahitana rano handroana ny mponina ka namaky ny fantson-drano ao Malabon. Miezaka mampivoitra ity tsy fahampian-drano ity ireo mpitoraka bilaogy any Filipina.
Miahiahy i Blackshama's blog mahita fa ny famerana ny rano dia miseho mandritra ny fotoam-pahavaratra.
Hatramin'izay dia ny volana aogositra no volana be orana indrindra. Raha tsy misy ny fiovana tampoka dia amin'ny volana ambony no volana maina indrindra. Ny volana septambra no volana farany isian'ny orana rehefa avy eo dia manomboka amin'izay ny maintany. Ny hany azo atao dia ny mampihena ny fampiasana rano.
Nisy koa ity tsy fahampian'ny rano ity vokatry ny rivo-doza “Basyang” (anarany iraisam-pirenena: Conson). Window To my Soul (Varavarankelin'ny fanahiko) no “nandeha” niaraka tamin'ny tsy fahampian'ny rano.
Andraso, tsy maintsy manana rano isika. Ambany be ny tsindry fampakaran-drano ka tsy mahatafakatra azy. Tsy tonga ao an'efitranoko akory. Tsy misy rano ny trano fandroako. Tsy nisy rano nitete ny fantsona hatramin'ny nandalovan'ny rivodoza (Typhoon Basyang). Tsy maintsy mitady rano any ambany rihana indrindra aho.
I am Hybrid Cha mizara ny tsy fahampian-drano iainany.
Tena fijaliana be ho ahy mihitsy, ho antsika rehetra ary tsy maintsy maharitra faran'izay tratrako aho satria tsy manan-tsafidy (mihomehy). Vilia, fitaovan-dakozia hafa, vilany ary vera tsy voasasa, avela fotsiny eo ankavian'ny toerana fanasana azy ao an-dakozia mandritra ny alina ; tsy afaka mandro am-pilaminana (mandrapahatongan'ny rano, tonga ve???) amin'ny 6 ora maraina sy ny fandaozany (mandao ve??? tahaka ny mpamangy) amin'ny 1 ora folakandro. Any am-piasana, mba te handro kely aho (rehefa mba te handro) kanefa rehefa tsy misy moa ny rano, tsy misy azoko atao fa tsy maintsy miaritra ny fofona hafahafa sy ny petapetaka eny aho. Misy zavatra hafa tiako hatao koa, zavatra fanaoko mahazatra kanefa tsy afaka nataoko intsony efa fotoana fohifohy izay (hatramin'ny alakamisy alina, 15 jolay raha hamafisiko) satria tsy niara-niasa tamiko mihitsy ny rano.
Let's Go Pinoy koa mizara ny zavatra niainany izay heveriny fa mifandraika amin'ny tsy fhampian'ny rano.
Mbola manome rano izay ilaina ihany aloha hatreto ny fantsona ao aminay, omaly izao dia rano miloko volon-tany matsora no navoakany. Tamin'ny voalohany dia noheveriko fa vokatry ny fantsona maloto izany ka nosasako anatiny sy ivelany avy eo nokobaniko tsara, hitako anefa fa hay ilay rano mihitsy no maloto. Dia ohatra izay foana fa tamin'ny maraina izy izao no mba tsy dia tena volon-tany loatra. Noho izany toe-javatra izany dia tsy te handro aho omaly. Kanefa noho ny hafanana be loatra sy ny hatsembohana efa mihamitombo dia nampiasaiko ihany ilay rano.
Pinoy Buzz III mandroso sososn-kevitra tokony horaisin'ny fanjakana hamahana maharitra ity olana tsy fahampian'ny rano ity.
1. Tokony hamboarina ny trano rehetra ho afaka hamerina hampiasa ny rano avy nampiasaina tany amin'ny fanasam-bilia sy ny fidiovana.
2. Tokony hanangona ranon'orana ny tokantrano rehetra.
3. Ny trano fivarotana rehetra sy ny trano lehibe rehetra dia tokony hanana toerana fanadiovana rano maloto avokoa. Ny trano kelikely tokony hitambatambatra ka hanana izany fitaovana izany, fa ny lehibe kosa dia tokony hanana ny azy manokana.
4. Tsy azo atao intsony ny manitatra kianja filalaovana golf sy toerana fanangonana rano.
5. Hatomboka ny fananganana toerana fasiana fitaovana fanalana sira…
6. Atomboka ny fananganana fanadiovana rano eo amin'ny reniranon'i Pasig sy Laguna de Bay.
Araka ny voalazan'i Radical's Nut, ity olana tsy fahampian'ny rano ity dia vokatry ny toe-javatra aterak'i El Niño fa tsy tokony hojerena ratsy hoe ” noho ny fanomezana ho an'ny tsy miankina amin'ny fanjakana ny fitantanana ny Metropoltan Waterworks and Sewerage System (MWSS) 13 taona lasa izay.”
Anisan'ny fampanantenana nataon'ny mpitantana tsy miankina ny rano, sy ny fitondran'i Ramos, ny hanatsarana ny fitaovana mampitosaka tsara. Ny tanjona amin'izany fanatsarna izany dia ny hampihenana ny fampisana rano tsy andoavam-bola (NWR, na ny rano very sy tsy voatantavana) ary ao koa ny fiezahana hahatrarana ny taha maneran-tany 24/7 ny famatsiana rano amin'ny fampiakarana ny isan'ny tokantrano mahazo izany . Tamin'ny fahazoany alalana hitantana ny MWSS, ireo mpitantana tsy miankina ireo dia nanome toky ny hahatrarana io taha maneran-tany io tamin'ny taona 2001.
Kanefa mandraka ankehitriny, latsaky ny 60 isan-jato amin'ny tokantrano 790 000 sahanin'ny Maynilad no mahazo rano 24 ora raha 74 isan-jato monja no mahazo rano 3 500 grama isaky ny metatra toradroa (PSI) na tosika mafy (vakio eto). Maherin'ny antsasany (53 isan-jato) ny rano omen'ny Mynilad no mbola mamono antoka vokatry ny fahaverezana (vakio eto)…
Mbola tsy misy zavatra eo am-pelantanan'y NWR azo anaporofoana mazava ny fisian'ny rano very na nisy nangalatra. Kanefa ny fisian'ny fangalarana rano tsy an-kiato amin'ny fantsona dia azo porofoina amin'ny fiakaran'ny vidin-drano aloa vokatry ny famatsiana amin'ny ankapobeny taorian'ny fisitahan'ny fanjakana tamin'ny fitantanana ny rano. Hatramin'ny naha tsy niankina ny MWSS, ny tobin'ny Maynilad dia nahavita nampiakatra ho 449 isan-jato ny tahan'ny hetra fototra ary ao Manille fotsiny dia tafakatra 845 isan-jato. Apetraho izany eo amin'ny toerana ratsy amin'ny tsy fahampian'ny asa, tsy fiakaran'ny karama sy ny fidiram-bola, ary ny fiakaran'ny vidim-piainana haingana dia ho hitanao ny sary avoakany.
Tantaran'ny Filipina farany
29 Jolay 2021Azia Atsinanana